MarkAsRead7 waxay calaamadeysaa ogeysiisyada sida akhriska | Wararka IPhone
MarkAsRead7: ka saar wareegyada ogeysiinta adigoo nadiifinaya Xarunta Ogeysiinta (Cydia)
IOS waxay leedahay cayayaanka isticmaalka yar, xitaa haddii aan calaamadeyno ogeysiis sida lagu akhriyo Xarunta Ogeysiinta, wareegga cas ee ogeysiiska wuxuu kusii jiri doonaa astaanta dalabka illaa aan ka fureyno. Mahadsanid Jailbreak, Isticmaalayaasha ku sameeyay qalabkooda waxay leeyihiin Tweak cusub oo loo yaqaan MarkAsRead7, taas oo mas'uul ka ah ka saar wareegyada ogeysiiska codsi kasta haddii aan ka saarno ogeysiiska noocaas ah Xarunta Ogeysiiska ee macruufka. Isticmaalkeedu waa mid fudud sida lagu arki karo fiidiyowga kor ku xusan waana mid si buuxda ugu habboon qaababkii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka ee aaladaha mobilada ee Apple, macruufka 7.1.x.
Marka Tweak MarkAsRead7 la rakibo waxaan qarin karnaa wareegyada ogeysiiska ee codsiyada, ku calaamadee sida loo akhriyey, taas oo xaalado badan rajo beelin karta. Tan macnaheedu maaha in ogeysiiska arjiga la waayo marka la calaamadeynayo sida looga akhriyey Xarunta Ogeysiinta, laakiin waa inuu qarin doonaa iyaga, sidaas darteed haddii la fogeeyay MarkAsRead7 qalabkeenna wareegyada cas ee ogeysiisyada barnaamijyadan soo muuqan doono. Si fudud waa is dhexgal wanaagsan oo ka dhexeeya Xarunta Ogeysiinta iyo ogeysiisyada ku saabsan astaamaha barnaamijyadan Apple wuxuu ku biiri karaa iOS 8 si loo kordhiyo wax soo saarka iyo hawlgalka nidaamkaaga hawlgalka si sax ah loogu dhex daro shaqooyinkiisa.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan MarkAsRead waa inay taasi tahay gebi ahaanba bilaash ah, hadda waa la heli karaa waana laga soo dejisan karaa Cydia, waxaa lagu martigaliyay keydka BigBoss. Waa hubaal inay noqon doonto Tweak caan ah haddii shirkadda Cupertino aysan ku dhex-darin muuqaalkan qaababka mustaqbalka ee nidaamkeeda hawlgalka.
Maxaad u malaynaysaa MarkAsRead? Miyaad horeba isku dayday?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » Cydia » MarkAsRead7: ka saar wareegyada ogeysiinta adigoo nadiifinaya Xarunta Ogeysiinta (Cydia)
Waad ku mahadsan tihiin macluumaadka tifaftirka!
Ku jawaab iKhaliil
FitRPG-ga waxaad Fitbit-gaaga uga dhigaysaa RPG
IOS 7.1.2 waxay leedahay cilad leh ciidaha Jadwalka